२७ बैंकको सञ्चालनमा ५२ अर्ब, कर्मचारी खर्च कुन बैंकको कति ?
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २७ वाणिज्य बैंकले करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । ५१ अर्ब रुपैयाँको नाफामा ती बैंकहरूको खर्च कति हुन्छ होला ?
नौ महिनाको अवधिमा २७ वाणिज्य बैंकको सञ्चालन खर्च ५२ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ । भएको खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा कर्मचारीको सेवा सुविधामा देखिएको छ ।
कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा र तालिमका लागि ३७ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीको बोनसका लागि २९ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत लागेको छ । बैंकले नाफाको १० प्रतिशत रकम बोनस खुवाउनुपर्छ ।
यसरी कर्मचारीका लागि मात्रै ६६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य भौतिक तथा मेसिनरी खर्च २२ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ भएको बैंकहरूको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।
२७ मध्ये १० वटा बैंकको सञ्चालन खर्चभन्दा नाफा बढी देखिएको छ । १७ वटा बैंकको भने नाफाको तुलनामा सञ्चालन खर्च बढी देखिएको छ ।
कम सञ्चालन खर्च भएर पनि धेरै नाफा कमाउने बैंकको रूपमा नबिल बैंक छ । नबिल बैंकको नौ महिनाको सञ्चालन खर्च २ अर्ब ३६ करोड छ भने नाफा ३ अर्ब ६८ करोड छ ।
न्यून सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक नाफा निकाल्ने अर्को बैंक प्राइम कमर्सियल बैंक हो । यो बैंकको सञ्चालन खर्च १ अर्ब ३४ करोड छ तर नाफा भने २ अर्ब ८१ करोड पुर्‍याएको छ ।
सञ्चालन खर्चमा एनआईसी र नाफामा नबिल अगाडि छन् । कर्मचारीतर्फको खर्चको हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ । त्यस्तै, बोनस वितरणमा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक अगाडि छ ।
सञ्चालन खर्च धेरै भएका पाँच बैंक
समग्र बैंक सञ्चालन खर्चका हिसाबले २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा एनआईसी एसिया बैंक छ । त्यसपछि दोस्रोमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ ।
एनआईसी एसिया बैंक : ३ अर्ब ३६ करोड
ग्लोबल आईएमई बैंक : ३ अर्ब २७ करोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : २ अर्ब ९९ करोड
कृषि विकास बैंक : २ अर्ब ९८ करोड
प्रभु बैंक : २ अर्ब ६७ करोड
सञ्चालन खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा गएको हुन्छ । कर्मचारीलाई धेरै खर्च गर्ने बैंकहरूमा सबैभन्दा अघि ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । त्‍यसपछि धेरै खर्च गर्नेमा कृषि विकास बैंक छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक : २ अर्ब ३७ करोड
कृषि विकास बैंक : २ अर्ब ३५ करोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : २ अर्ब ३१ करोड
एनआईसी एसिया बैंक : २ अर्ब २८ करोड
नबिल बैंक : १ अर्ब ८५ करोड
कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी बोनस खुवाउनेमा सबैभन्दा अघि कृषि विकास बैंक रहेको छ । प्रतिकर्मचारी बोनसका हिसाबले नबिल, एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक अघि रहे पनि समग्र बोनस खर्चमा कृषि विकास बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक अघि देखिएका छन् ।
कृषि विकास बैंक : २ अर्ब २ करोड
ग्लोबल आईएमई बैंक : १ अर्ब ८१ करोड
एनआईसी एसिया बैंक : १ अर्ब ८१ करोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : १ अर्ब ७९ करोड
प्रभु बैंक : १ अर्ब ४७ करोड
चालु वर्षको नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले कमाएको छ भने ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एसिया बैंकले पनि उसलाई पछ्याएका छन् ।
नबिल : ३ अर्ब ६८ करोड
ग्लोबल आईएमई बैंक : ३ अर्ब ५७ करोड
एनआईसी एसिया : ३ अर्ब
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक : २ अर्ब ८४ करोड
प्राइम कमर्सियल बैंक : २ अर्ब ८१ करोड
यी सबै शीर्षकमा ग्लोबल आईएमई बैंक र एनआईसी एसिया बैंक अग्रस्थानमा छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८, १८:४०:००